Uyiphatha kanjani ilayisensi yomqhubi kwi-iPhone | IPhone iindaba
UMiguel Hernandez | | iPhone, Izaziso, Izifundo kunye neencwadana
Kudala-dala, iCandelo Jikelele lezoThutho eSpain lathembisa abasebenzisi ukuba bazakuphepha isidingo sokuphatha amaxwebhu ezithuthi ngokwabo, njengephepha-mvume lokuqhuba, i-ITV kunye namaxwebhu ahambelana ne-inshurensi yamatyala oluntu. Ngoku ungathatha iphepha-mvume lakho lokuqhuba ngqo kwifowuni yakho ngenxa yesicelo esisemthethweni se-miDGT, sikubonisa ukuba ungayenza njani. Lixesha lokuba sishiye amaphepha agcinwe kakuhle ekhaya kwaye ulibale malunga nokuxakeka xa igunya lisicela amaxwebhu, ixesha lobudala bedijithali lifikile.
Esi sicelo sisungulwe "ukufikelela kwangoko" kwiVenkile yeGoogle Play kwaye kwangoko emva koko ikwasivumele ukuba siyifake kwiVenkile yeApp ye-iOS, oko kukuthi, siya kuba nakho ukusebenzisa lo msebenzi mtsha ubonelelwa yi-DGT kubo bonke. kuthi ngqo nokuba sinesixhobo se-Android okanye ukuba sinaso isixhobo se-iOS, Ubuncinci ziindaba ezimnandi, kwaye kukuba ezi zinto zisebenzayo eSpain zisetyenziselwa ukuhambelana nenkonzo enye, kodwa hayi enye.
1 Yintoni ekufuneka uyibeke kwikhadi kwi-iPhone yakho?
2 Sisenza ntoni isicelo se-miDGT?
3 Imvume yokujikeleza kunye nephepha lobugcisa kwiselfowuni yakho
4 Ungangena njani kwisicelo se-miDGT?
5 Imisebenzi emitsha
Yintoni ekufuneka uyibeke kwikhadi kwi-iPhone yakho?
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhuphela usetyenziso lwe-miDGT, isicelo esisemthethweni soLawulo oluPhezulu lwezeNdlela olusimahla.
Okwangoku, usetyenziso lukuvumela ukuba ujonge iimvume zakho zedijithali kunye nedatha yakho ephambili. Kungekudala, siza kubandakanya izinto ezintsha ezinjengezaziso kunye neentlawulo zezohlwayo, ukuthengwa kweefizi, ukucela ukuqeshwa kwiiofisi zethu okanye iinkqubo eziphambili ezinxulumene neemvume zakho kunye nezithuthi zakho.
Nje ukuba ufake usetyenziso lwe-miDGT, ungaqala ukuyisebenzisa ngokukhawuleza nangokulula, usebenzisa zonke iimpawu. Yenzelwe ukuba sinqande ukuhambisa nathi onke amaxwebhu ezithuthi zethu kwaye oko kuyinzuzo yokwenene, ngakumbi xa singenayo nathi okanye siye safumana ukubiwa okanye ukulahleka kwayo.
Sisenza ntoni isicelo se-miDGT?
Siqala ngeyona nto ibaluleke kakhulu, nelayisensi yethu yokuqhuba. Nje ukuba sichonge isicelo se-miDGT siya kuba nakho ukufikelela kuyo yonke idatha malunga nelayisensi yethu yokuqhuba ngohlobo lwayo lwedijithali, amagama, iifani kunye nemihla efanelekileyo, kunye nolunye ulwazi. Ngendlela efanayo, siya kuba nakho ukusebenzisa ikhowudi ye-QR eyichaza kwabasemagunyeni kwaye siqwalasele amanqaku ethu aseleyo ngokulula nangokukhawuleza.
Isicelo sinecandelo "Isithuthi sam", Kuyo siza kubona izithuthi zethu ezibhalisiweyo zichongiwe kwaye zinxulumene nephepha-mvume lethu lokuqhuba, lichongwe ngeplate yelayisensi. Ngokufikelela kweli candelo siya kuba nakho ukubona ukuba yeyiphi ilebheli yokusingqongileyo eyabelwe imoto yethu, kunye nenkcazo ekhawulezayo ngayo, ebandakanya:
Umhla wobhaliso lokuqala
Ibheji yendalo esingqongileyo
Ukuqinisekiswa kunye nedatha ye-ITV yokugqibela
I-inshurensi kunye nokuphelelwa lixesha
Imvume yokujikeleza kunye nephepha lobugcisa kwiselfowuni yakho
Olunye uphawu olunika umdla kule nkqubo intsha yedijithali yokuhambisa amaxwebhu kukuba siya kuba nokufikelela kwimvume yokuhambisa esemthethweni ngokupheleleyo nekhoyo. Njengakwimeko yelayisensi yokuqhuba, siya kuba nokufikelela kwilayisensi yokuqhuba kunye neqhosha lekhowudi yeQR, le khowudi yakuba isebenze iya kuvumela igunya elifanelekileyo ukuba liskene nenkqubo yokufunda ukuze kuqinisekiswe ngokusesikweni idatha equlethwe kuyo, inyani kukuba kubalulekile ukuqhubela phambili kwezobuchwephesha ukukhawulezisa Ukufundwa kwamaxwebhu kwaye ngaphezulu kwako konke ukuphelisa ngokupheleleyo inkohliso.
Kumatyala ezithuthi zale mihla, siya kuba nakho ukufikelela kwiphepha lobuchwephesha kwisithuthi apho idatha ihlala ihamba ngasemva kwikhadi le-ITV inokufunyanwa. Ngayiphi na imeko, nokuba asinalo iphepha ledatha elektroniki, uya kuba nakho ukubona kwiscreen sangaphambili ukuba imoto yakho ine-ITV esemthethweni kunye nomhla wokuphelelwa kwayo, ke umba wephepha lobuchwephesha yeyona nto ingabalulekanga kuzo zonke ezifumanekayo ekusetyenzisweni kweCandelo eliPhezulu leZendlela.
Ungangena njani kwisicelo se-miDGT?
Ewe, eyokuqala imingxunya yeyokungena ngokuchanekileyo, kuba kuninzi kunokuba ngumsebenzi onzima ukuba awuhambelani nenkqubo Cl @ ve Ukuchongwa okuqhelekileyo kuLawulo. Eyona nto ilula kwaye icetyiswayo kukuba unesatifikethi sedigital esifakwe kwi-iPhone yakho, Ndikushiya ungene LE LINK, isifundo esheshayo esikhawulezayo sendlela yokufaka izatifikethi zedijithali kwi-iPhone ngokukhawuleza. Ngayiphi na imeko, ungasebenzisa ezinye iindlela ezikhoyo ukuzichonga, eyona ibonakala ifanelekileyo kuwe kuzo zonke.
Okwangoku, isicelo sisekuqaleni kwaye kungekudala siza kuba nokusebenza ngakumbi ukufumana yonke into enokulindelwa kuyo.
Ngendlela efanayo siyakukhumbuza ukuba kusafuneka uzise amaxwebhu kwifomathi ebonakalayo ukuba awufuni kuhlwaywa, njengoko uMlawuli Jikelele weZothutho elumkisa.
Esi sicelo sikwisigaba esivulekileyo sovavanyo, ke siyakukhuthaza ukuba usebenzisane nathi ngaphambi kokumiliselwa ngokusithumela naziphi na izimvo okanye iingcebiso zokuphucula. Siyakukhumbuza ukuba kufuneka uqhubeke uphatha amaxwebhu akho okanye esithuthi sakho kwifomathi yomzimba de i-DGT ivume kungekudala umgaqo ovumela ukuba uphathe i-App kuphela kwaye ulibale malunga namaphepha.
Siza kukwazisa ngolungiso lwexesha elizayo kunye neendaba zesicelo se-miDGT, ngayo sinokuhlawula isohlwayo sendlela ngokukhawuleza, asisayi kuphinda sibe nazingxengxezo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Uyiphatha kanjani ilayisensi yomqhubi kwi-iPhone
Okwangoku ayifumaneki 🙁
Ewe, iVenkile yeapile indixelela ukuba usetyenziso alufumaneki kwilizwe lam
Inkqubo ayifumaneki kwilizwe lakho ...
Molo, ndiyabona ukuba ndingowokugqibela ukukwazi ukuyifaka nge-6 emva kwemini.
Usetyenziso alufumaneki kwilizwe lakho… inde indlela ekusafuneka uhambe phambi kokuba uyikhuphele
Molo, isusiwe kwiVenkile yeApple kwaye asazi ukuba kutheni. Iya kufumaneka kungekudala.
Siyifakile kwaye siyayisebenzisa, njengabanye abasebenzisi kwiqela lethu leTelegram.
Ayifumaneki kwiVenkile ye App
Hayi, ayifumaneki kwiAppStore. Ngaba uya ngokucofa iqhosha okanye enye into?
Nam andiyiboni. Ndazise xa ndikhoyo, nceda.
Akandivumeli nokuba andixelele ukuba ilizwe lakho okanye ingingqi ayifumaneki
Molo: bayirhoxisile, de kwaba yinguqu yokugqibela. Kwaye, eli nqaku kufuneka lithethe ngokucacileyo ukuba, nokuba isicelo sifakiwe, ASIKHO ixesha lokushiya iphepha-mvume lokuqhuba kunye namaphepha ekhaya; ngenxa yoko, kuyimfuneko ukwamkelwa komthetho oqhubayo.
Nceda ususe ibinzana "Lixesha lokushiya amaphepha agcinwe kakuhle ekhaya kwaye ulibale malunga nokuxakeka xa igunya lisicela amaxwebhu, lifikile ixesha lobudala bedijithali."
Ngaba umhlathi wokugqibela apho kuboniswe ngokucacileyo kuwo ubonakala umncinci kuwe?
Owu mnqweno onomdla wokuphawula ngaphandle kokufunda amanqaku!
Ingqondo yevidiyo ye-iPhone 12 enomtsalane
Isicelo se-HBO ngoku sivumela umxholo ukuba ukhutshelwe kwisixhobo